Nay Nyo Chan: Lesson-7 Eating
Nowadays, she eatsabalanced diet includingalot of nourishing meals (meals that are healthy and nutritious) that she prepares herself. ယခုအခါမှာတော့ အမေက အမေကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်ပြည့်ပြည့်၀၀ပါတဲ့အစားအစာတွေနဲ့သင့်တင်မျှတတဲ့အစားအစာတွေ စားနေပါပြီ။ She doesn’t buy organic food because she thinks the prices are outrageous, but she stocks up on fresh produce (fresh fruits and vegetables) so that she can grab an apple or some veggies when she wantsaquick snack (something small and fast to eat). အမေက ဓာတုဆေးဆိုးတွေမပါတဲ့ အော်ဂန်နစ်အစားအစာတွေကို မ၀ယ်ဘူးလေ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဈေးတွေက မတန်မရာဖြစ်တာကြောင့်ပေါ့။ဒါပေမယ့် အမေက လက်ဆက်တဲ့ လယ်ယာထွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေတော့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားတယ် ဒါကလည်း အမြန်စားသွားရေစာ (မြန်မြန်စားလို့လည်းရ အသေးစား အစားအစာတစ်ခုခု) စားချင်လာတဲ့အခါ ပန်းသီးလေးတစ်လုံးဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးဖြစ်ဖြစ် လှမ်းယူဆွဲစားနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လေ။
She has also learned to eat in moderation and watch her portion sizes (how much food you take). အမေက ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်စားဖို့လည်း သိနေပြီး အချိုးအစားပမာဏ(စားရမယ့်အစားအစာပမာဏ) ကိုလည်း ဂရုစိုက်တတ်နေပါပြီ။
I often stop by her house when I’m in the mood forahome-cooked meal. ကျွန်တော်ကတော့ အိမ်ချက်အစားအစာ စားချင်လာတဲ့အခါ အမေ့အိမ်ကို ခန၀င်လိုက်တာပဲဗျာ့။
The other day she madeahearty stew (a thick soup with lots of flavors and ingredients) that was full of beans and vegetables. အရင်ရက်က အမေက ပဲသီးတွေနဲ့ဟင်းရွက်တွေပြည့်ပါတဲ့ စွပ်ပြုတ်ဟင်းပွဲကြီး (အရသာစုံနဲ့ဟင်းခက်တွေအများကြီးနဲ့ စွပ်ပြုတ်ဟင်း အကြီးစား) ချက်တယ်လေ။
My brother, who hasahealthy appetite (the capacity to eatalot), hadasecond helping (a second portion) – but I found the stew so filling that I could barely finish my bowl. ခံတွင်းကောင်းတဲ့ (အများကြီးစားနိုင်စွမ်းရှိ) ကျွန်တော့်ညီကတော့ လိုက်ပွဲတောင် တောင်းလိုက်သေး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ စွပ်ပြုတ်ဟင်းရည်က ကျွန်တော့်ဟင်းခွက်ကို မကုန်နိုင်လောက်အောင် ပြည့်လွန်းနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိလိုက်ရတယ်ဗျာ့။
My mother recently told me that she’d like to try some international cuisine. အမေက နိုင်ငံတကာအစားအစာ စားချင်ကြောင်း မကြာသေးခက်က ကျွန်တော့်ကို ပြောခဲ့တယ်။
I was surprised to hear that, becauseafew years ago she hadabad experience after getting food poisoning (when you get sick because of contaminated food) ataJapanese restaurant. အမေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကမှ ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ အစာအဆိပ်သင့်လို့ အတော့်ကို နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် (အဆိပ်အတောက်၊ ရောဂါပိုးမွှားစသည်ဖြင့်) ညစ်ညမ်းနေသည့်အစားအစာများကြောင့် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါ) အမေ အဲလိုပြောတာ ကြားတော့ ကျွန်တော် အရမ်းကို လန့်ဖြန့်သွားတယ်။
So tomorrow I’m taking her toaBrazilian steakhouse. I told her to eat light meals (small meals) during the day so that she doesn’t spoil her appetite for dinner (“spoiling your appetite” means eating food earlier, and then not being hungry forameal later). ဒါကြောင့် မနက်ဖြန်တော့ ကျွန်တော် အမေ့ကို ဘရာဇီးအမဲကင်ဆိုင် ခေါ်သွားမယ်။ ညနေစာအတွက် အမေခံတွင်းမပျက်စေဖို့ နေ့ခင်းမှာ အဆာပြေ အစားအစာပဲ စားပါလို့ အမေ့ကို ကျွန်တော်မှားထားတယ်။ (Spoiling your appetite ဆိုတာ စောစောက အစားအစာစားထားတဲ့အတွက် နောက် စားမယ့် အစားအစာအတွက် ဗိုက်မဆာတော့ဘူး လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်)
1. During the summer, our kids eatalot of __________ food - popcorn, candy, ice cream, cookies, etc.
7. Spinach is one of the most __________________ vegetables - it’s full of vitamins and minerals.
9. The food at this restaurant is all natural - they don’t use any type of __________________food.
Posted by Nay Nyo Chan at 9:55 PM